Milkiilaha Dahabshiil oo 50 jeer ka dhaartay inuusan ka dambeyn dilkii Fanaanad Saado Cali Warsame * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Milkiilaha Dahabshiil oo 50 jeer ka dhaartay inuusan ka dambeyn dilkii Fanaanad Saado Cali Warsame
By A warsame	 Last updated Mar 21, 2016
Mareeg.com: Milkiilaha Shirkadda weyn ee Dahabshiil, Xaaji Maxamed Saciid Ducaale ayaa 50 dhaarood ka maray inuusan ka dambeyn, kuna lug laheyn dilkii sanadkii 2014 magaalada Muqdisho loogu geystay fanaanada Saado Cali Warsame oo ka tirsaneyd baarlamaanka Soomaaliya.
Magaalada Laascaanood ee xarunta Gobolka Sool ayaa waxaa ka dhacay kulan balaaran oo u dhaxeeyay labada beelood ay kasoo kala jeedaan Allaha u naxariistee Fanaanadii Saado Cali Warsame iyo Milkiilaha Shirkada Dahabhiil, Maxamed Saciid Ducaale.
Kulankan ka dhacay magaalada Laascaanood ayaa ujeedkiisu ahaa sidii Milkiilaha Shirkada Dahabshiil uu uga dhaaran lahaa tuhun muddo docday oo ahaa in uu ku dambeeyay qorshihii lagu dilay Fanaanada Saado Cali Warsame.
Mulkiilaha Shirkada Dahabshiil ayaa dhaar mayd 00 ah 50 dhaarood labada beelood hortooda lagu mariyey, isagoo meesha ka saaray in haba yaraatee uu wax lug ah ku lahaa dilkii loo geestay Fanaanada Saado Cali Warsame.
Odayaasha labada Beel ee kasoo kala jeedaan Milkiilaha Shirkada Dahabshiil Maxamed Saciid Ducaale iyo Saado Cali Warsame ayaa dhaarta kadib waxa ay shaaciyeen in ay ku qanceen dhaarta ayna halkaasi kusoo dhamaatay tuhunkii ahaa in Milkiilaha Dahabshiil ku lug lahaa dilkii Saado.
Fur Link-gan si aad u daawato odayaasha labada dhinac oo hadlaya: Hadduu kuu furmi waayo koobiyey ee ku fur bog cusub.
Nin la dhashay Fanaanada Saado Cali Warsame oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in ay ku qaacsan yihiin dhaarta Milkiilaha Dahabshiil ayna ka baxday tuhunkii ay ka qabeen in uu ka dambeeyay dilkii Walaashood loogu geestay magaalada Muqdisho.
Saado Cali Warsame oo aheyd fanaanad caan ah, kana tirsaneyd baarlamaanka Soomaaliya ayaa 23-kii July 2014, lagu dilay xaafadda Taleex ee degmada Hodon ee Muqdisho, waxaana dilkeeda sheegtay Alshabaab.
Muqdisho: Labo Isbitaal oo xalay dab qabsaday
Sawirro: Webiga Shabeelle oo isu bedlay dhul qallalan